ဝယ်ယူရေး/ကြေငြာများ | Community Driven Development Project | Page 4
၀ယ်ယူရေး/ကြေငြာများ	အလုပ်ကြော်ငြာ(REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST _Technical Auditor Firm)
REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST Ministry of Livestock, Fisheries and Rural Development Department of Rural Development National Community Driven Development Project IDA Grant H814-MM Assignment Title: Technical Auditor Firm Reference No: C- 10/ 2014 The Republic of the Union of Myanmar has received financing from the World Bank towards the cost of its National Community Driven Development Project (NCDD), which ...	Read More »
အလုပ်ကြော်ငြာ(Local Consultant for Gender Mainstreaming)
အလုပ်ကြော်ငြာ မွေးမြူရေး၊ ရေလုပ်ငန်းနှင့် ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ကြီးဌာန (ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း National Community Driven Development Project – NCDDP ကမ္ဘာ့ဘဏ်၏ထောက်ပံ့ငွေဖြင့် ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနကအကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်လျှက်ရှိသောလူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း (နေပြည်တော်)တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အောက်ဖော်ပြပါရာထူးအတွက် ပြည်တွင်းအကြံပေး(၁)ဦးငှားရမ်းလိုပါသည်− C 5.1 – Local Consultant for Gender Mainstreaming (၁)ဦး စာချူပ်သက်တမ်းမှာ ၂၀၁၅ခုနှစ် ၊ ဖေဖော်ဝါရီလမှစ၍ တစ်နှစ်ဖြစ်ပြီး အဓိကဆောင်ရွက်ရမည့် တာဝန်များမှာ စီမံကိန်း၏ ကျား/မ တန်းတူ ညီမျှရေးကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် စီမံကိန်းအကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၊ လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာနတို့နှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန် ဖြစ်သည်။ လျှောက်ထားလိုသူများအနေဖြင့် ကိုယ်ရေးအချက်အလက်တွင် လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံများကို အသေးစိတ်ဖော်ပြ၍ လိုအပ်သောအထောက်အထား များနှင့်အတူ (၁၉.၁.၂၀၁၄)ရက်နေ့နောက်ဆုံးထားပြီး အောက်ဖော်ပြပါလိပ်စာသို့ အီးမေးလ်ဖြင့်ဖြစ်စေ၊ လူကိုယ်တိုင်ဖြစ်စေ ပေးပို့လျှောက်ထားနိုင် ပါသည်။ စီမံကိန်းအကြောင်း ၊ လုပ်ငန်းတာဝန်များနှင့်အသေးစိတ်အချက်အလက်များ(Term of ...	Read More »
အလုပ်ကြော်ငြာ (National finance consultant / National Senior finance Assistant/ National Procurement Assistant)
အလုပ်ကြော်ငြာ မွေးမြူရေး၊ ရေလုပ်ငန်းနှင့် ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ကြီးဌာန (ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း National Community Driven Development Project – NCDDP ကမ္ဘာ့ဘဏ်၏ထောက်ပံ့ငွေဖြင့် ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနကအကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်လျှက်ရှိသောလူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း (နေပြည်တော်)တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အောက်ဖော်ပြပါရာထူးများအတွက် ဝန်ထမ်းများငှားရမ်းလိုပါသည်− (၁) National finance consultant (၂၄)လ ကျား/မ(၁)ဦး (၂) National Senior finance Assistant (၂၄)လ ကျား/မ(၁)ဦး (၂) National Procurement Assistant (၂၄)လ ကျား/မ(၂)ဦး လျှောက်ထားလိုသူများအနေဖြင့် လိုအပ်သောအထောက်အထားများ၊ လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံနှင့် ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို အောက်ဖော်ပြပါ လိပ်စာသို့ (၁၉.၁.၂၀၁၅)ရက်နေ့ နောက်ဆုံးထား၍ အီးမေးလ်ဖြင့်ဖြစ်စေ၊ လူကိုယ်တိုင်ဖြစ်စေ ပေးပို့လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ ရွေးချယ်ခံရသူ ...	Read More »
စီမံကိန်းမြို့နယ်များအတွက် နည်းပညာအကြံပေးများ လျှောက်လွှာ ခေါ်ယူခြင်း (ရန်ကုန်/နေပြည်တော်ကောင်စီနယ်မြေ)
REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST Department of Rural Development Ministry of Livestock, Fisheries and Rural Development National Community Driven Development Project Assignment Title: Township Level Technical Assistance Reference No: C4.1 XXX** Township , Naipaytaw Territory C4.6 XXX** Township, Yangon Region The Republic of the Union of Myanmar hasreceived financing from the World Bank to implement the National Community DrivenDevelopment Project ...	Read More »
စီမံကိန်းမြို့နယ်များအတွက် နည်းပညာအကြံပေးများ လျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း(revised Version)(လေမျက်နှာ/ပင်လည်ဘူး/စေတုတ္တရာ/အမ်း)
REQUEST FOR EXPRESSIONSOF INTEREST Department of Rural Development Ministry of Livestock, Fisheries and Rural Development National Community Driven Development Project IDA Grant H814-MM Assignment Title: Township Level Technical Assistance Ref No.C-4.2(Pinlebu Township, Sagaing Region), Ref No.C-4.3(Sidoktaya Township, Magway Region), Ref No.C-4.4(Ann Township, Rakhine State) Ref No.C-4.5(Laymyetnar Township,Ayeyarwaddy Region) The Republic of the Unionof Myanmar has received financing from the World ...	Read More »
စီမံကိန်းမြို့နယ်မျာအတွက် နည်းပညာအကြံပေးများ လျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း(ပင်လယ်ဘူး/စေတုတ္တရာ/လေးမျက်နှာ)
REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST Department of Rural Development Ministry of Livestock, Fisheries and Rural Development National Community Driven Development Project IDA Grant H814-MM Assignment Title: Township Level Technical Assistance Ref No. C-4.2(Pinlebu Township, Sagaing Region), Ref No. C-4.3(Sidoktaya Township, Magway Region), Ref No. C-4.5(Laymyetnar Township, Ayeyarwaddy Region) The Republic of the Union of Myanmar has received financing from the ...	Read More »
Page4of 4«1234	Project Overview